Tokony hiala amin'ny personalization ve ireo mpivarotra? | Martech Zone
Alahady, Martsa 29, 2020 Alahady, Martsa 29, 2020 Garin Hobbs
Lahatsoratra iray vao haingana Gartner no nitatitra:
Amin'ny taona 2025, 80% amin'ireo mpivarotra efa nanam-bola amin'ny personalization no handao ny ezak'izy ireo.
Faminaniana 2020: Ry mpivarotra, tsy izany fotsiny no izy aminao.
Ankehitriny, ity dia toa fomba fijery mampiahiahy ihany, fa ny tsy hita dia ny tontolony, ary heveriko fa ity…
Fahamarinana manerantany fa ny fahasarotan'ny asa dia refesina mifandraika amin'ireo fitaovana sy loharano ananany. Ohatra, ny fandavahana ny hady amin'ny sotrokely dia traikefa fadiranovana tsy manam-petra noho ny amin'ny backhoe. Amin'ny fomba mitovy amin'izany, ny fampiasana sehatra antontan-kevitra momba ny lova efa lany daty sy ny fandefasana hafatra handefasana ny paikadinao manokana dia lafo sy sarotra lavitra noho ny tokony ho izy. Ity fomba fijery ity dia toa tohanan'ny zava-misy, rehefa nanontaniana izy dia nilaza ny mpivarotra, tsy fisian'ny ROI, ny loza ateraky ny fitantanana angona, na izy roa, ho antony voalohany mahatonga azy ireo kivy.
Tsy mahagaga izany. Sarotra ny personalization, ary zavatra maro no mila miaraka miaraka amina symphony mba hanaovana azy amin'ny fomba mahomby sy mahomby. Toy ny lafiny maro amin'ny asa aman-draharaha, ny fanatanterahana ny paikady ara-barotra amin'ny fomba mahomby dia eo amin'ny fihaonan'ireo singa telo manakiana; Ny olona, ​​ny fizotrany ary ny haitao ary ny fahasahiranana dia mipoitra rehefa tsy mifanaraka — na tsy afaka — ireo singa ireo.
Andao atomboka People: Ny personalization misy dikany sy mandaitra dia manomboka amin'ny fananana finiavana marina, hametraka ny mpanjifa eo afovoan'ny fitantarana afovoany lanja. Tsy misy AI, famakafakana vinaingitra na automatisation afaka manolo ny singa lehibe indrindra amin'ny fifandraisana: EQ. Noho izany, ny fananana olona marina, amin'ny fisainana marina, dia fototra.
Manaraka, andao jerena Process. Ny fizotry ny fampielezan-kevitra tsara dia tokony hojerena ny tanjona, ny takiana, ny fidirana ary ny fetr'andro isaky ny mpandray anjara ary avelao ny ekipa hiasa amin'ny fomba matoky azy ireo, mahazo aina ary mahomby. Saingy mpivarotra be loatra no voatery milefitra, mahita ny fomban'izy ireo voafetra sy voatondron'ny lesoka amin'ny fitaovam-pivarotan'izy ireo sy ny sehatra anaovany izany. Ny fanodinana dia tokony hanompo ny ekipa fa tsy ny mifanohitra amin'izay.
Farany, andao hiresaka teknolojia. Ny sehatra varotrao sy ny fitaovanao dia tokony ho loharanon-kery fampitomboana, fampitomboana hery, fa tsy fehin'ny fetra. Ny personalization dia mitaky ny mpivarotra mahalala ny mpanjifany, ary mahalala ny mpanjifanao dia mila angona… antontan-kevitra marobe, avy amin'ny loharano maro, voaangona ary manavao tsy tapaka. Ny fananana angona fotsiny dia tsy dia ampy. Ny fahaizana miditra haingana sy manasiaka hevitra azo ampitaina avy amin'ny angon-drakitra ahafahan'ny mpivarotra mandefa hafatra manokana izay mitazona ny hafainganana sy ny toe-javatra iainan'ny mpanjifa ankehitriny.
Maro amin'ireo tena mahazatra sy atokisana sahirana ireo sehatra hamaliana ireo fitakiana tsy mitsaha-mitombo izay mihantsy ny mpivarotra maoderina. Ny angona voatahiry amin'ireo rafitra tablular taloha (mifandraika na amin'ny fomba hafa), dia sarotra kokoa amin'ny ankapobeny (sy / na lafo) ny mitahiry, mandanjalanja, manavao ary manontany fa tsy ny angona amin'ny rafitra tsy tablular, toy ny arrays.
Ny ankamaroan'ny sehatra fandefasan-kafatra lova dia mampiasa tahiry miorina amin'ny SQL, mitaky ny hahalalan'ny mpivarotra ny SQL, na ny fanerena azy ireo hamela ny fifehezana ny fanontaniany sy ny fizarazaran'izy ireo amin'ny IT na Engineering. Farany, ireo sehatra taloha ireo dia manavao ny angon-drakitra amin'ny alàlan'ny ETL isan'alina ary mamelombelona, ​​mametra ny fahafahan'ny mpivarotra mandefa hafatra mifandraika sy ara-potoana.
Mifanohitra amin'izany, sehatra maoderina toa ny Iterable, ampiasao ny firafitra angon-drakitra NoSQL azo ovaina kokoa, ahafahan'ny renirano angona mivantana sy ny fifandraisana API avy amina loharano maro miaraka. Ireo firafitry ny angona toy izany dia haingana kokoa amin'ny fizarana ary mora kokoa amin'ny fidirana amin'ireo singa manokana ny maha-izy azy, mampihena be ny fotoana sy ny vidin'ny fananganana fanentanana.
Namboarina vao haingana kokoa noho ireo mpifaninana efa voafehiny kokoa, ny ankamaroan'ireo sehatra ireo dia misy ihany koa ny fanohanan'ny fantsom-pifandraisana marobe toy ny mailaka, ny finday, ny mailaka, ny SMS, ny fanakan-dàlana ary ny mailaka mivantana, manome alalana ny mpivarotra handefa mora kokoa fitohizan'ny traikefa tokana rehefa mamindra ny traikefany amin'ny fantson'ny marika sy ny touchpoint ny mpanjifa.
Raha ireo vahaolana ireo dia mety hampihenjana ny làlan'ny famolavolana fandaharana sy hanafohezana ny vanim-potoana maha-sarobidy ny varotra, ny fananganan-jaza dia somary miadana eo amin'ireo marika lehibe kokoa na efa ela, izay nentin-drazana mpandala ny nentin-drazana kokoa ary tsy iharan'ny risika. Noho izany, ny ankamaroan'ny tombony dia nivadika ho marika vaovao na vao misondrotra izay mitondra kitapo teknika lova kely na pihetseham-po ratra.
Ireo mpanjifa dia mety tsy hamela ny fanantenan'izy ireo ny sandany, ny fahafinaretana ary ny traikefa tsy ho ela. Raha ny marina dia mampianatra antsika ny tantara fa mety hitombo ireo fanantenana ireo. Ny fandaozana ny paikadinao manokana dia tsy misy dikany any amin'ny tsena feno olona, ​​amin'ny fotoana mety ialan'ny mpanjifa ny fotoana tsara indrindra ananan'ny mpivarotra hanome sy hanavahana ny sandan'ny marika, indrindra fa misy safidy azo atao betsaka azo atao.
Ireto misy fanoloran-tena dimy azon'ny mpivarotra sy ny fikambanan'izy ireo manampy azy ireo amin'ny fivoaran'ny evolisiona mahomby:
Farito ny traikefa te-hanatitra ianao. Avelao izany ho teboka amin'ny kompà amin'ny zavatra hafa rehetra.
Manaiky fa ilaina ny fanovana ary manao ho azy.
Tombano vahaolana mety ho vaovao na tsy mahazatra.
Manapaha hevitra fa ny valim-pitia ny valiny dia lehibe kokoa noho ireo loza mety hitranga.
Avelao ny vahoaka hamaritra ny dingana; avelao ny fizotrany hametraka ny takiana amin'ny teknolojia.
mpivarotra manana handavaka ny hady, fa tsy manao manana mampiasa sotrokely.
Mangataha Demo azo ivalozana
Tags: iterablepersonalization marketingpersonalizationvarotra manokana
Garin dia talen'ny tetikady fifanarahana ao amin'ny Iterable, sehatra iray manome hery ireo mpivarotra B2C hifehy ny paikadin-kafatra ampita hafatra amin'ny alàlan'ny fampiasana maodely data azo ovaina sy azo ovaina mba hampahafantarana fifampiresahana lakilasy 1: 1 amin'ny alàlan'ny mailaka, finday, tranonkala ary fantsona sosialy.
vidREACH: Sehatra an-dahatsary mailaka reimagining Prospecting